Ukubopha Ama-Blogger - Ubudlelwano Nomphakathi
NgoMgqibelo, July 13, 2013 NgoLwesithathu, Agasti 13, 2014 Douglas Karr
Ngithole le imeyili evela kuchwepheshe wezobudlelwano bomphakathi ukubona ukuthi nginga blog yini mayelana nekhasimende labo ku Martech Zone. Le yi-imeyili yonke, ilandelwa imininingwane yakhe yokuxhumana nenombolo yocingo.
[Igama leKlayenti] landisa ibhizinisi nezinsizakalo zalo zamazwe omhlaba ngokuthola umhlinzeki wesevisi yemultimedia ese-UK ngesonto elizayo, ngokuqhubeka nokuqinisa umkhondo wayo womhlaba wonke nokufinyelela ezimakethe ezintsha.
Ngalokhu kuthengwa [Igama Leklayenti], elaziwa ngokukhiqiza ulwazi olungenakuqhathaniswa lwe-multimedia yezinhlobo zomhlaba wonke, luzokwethula emakethe yaseYurophu ukuqinisa ukwesekwa kwamakhasimende ezifunda enkampanini eYurophu, eMiddle East, e-Afrika naseNdiya. Njengamanje isekela imizamo yemidiya yezokuzijabulisa ezitolo, ku-inthanethi nakwidivayisi emazweni angama-70, [Igama leKlayenti] lisebenzela amaklayenti afana ne-Starbucks Coffee®.
Ngeminye imininingwane, sicela ubheke abezindaba zeBusiness Wire [Isixhumanisi].
Ungaba nentshisekelo yokubhala ngokutholwa okusha kwe- [Client Name]?
Isikhathi sobungcweti obuthandekayo bobudlelwano bomphakathi:
Okokuqala… ngobuchwepheshe lo SPAM wephula isenzo se-CAN-SPAM. Uyangicela futhi awunikeli indlela yokuzikhipha ohlwini ku-imeyili yakho (ngoba uyifihle njenge-imeyili yomuntu siqu). Anginabo ubuhlobo bebhizinisi nawe, futhi angikaze ngibe nobudlelwano nawe.
ngine angazi nhlobo ngubani iklayenti lakho noma kungani kufanele ngibhale ngazo. Ukubhala nje amagama abo akunikezi ukuqonda kwenkampani yabo, imikhiqizo yabo noma izinsizakalo zabo.
Awungitshelanga ukuthi bathenga bani. Ngumuphi umhlinzeki wesevisi? Kungani ifanele izithameli zami?
Ungangithumeli isixhumanisi sokufuna imininingwane eyengeziwe. Isikhathi sami sibalulekile. Ake ungitshele ukuthi kungani lezi zindaba ngokukhethekile ifanele ibhulogi yami nezethameli zayo.
Ngitshele ongathanda ukuthi ngibhale ngakho bese ngikubhalela izithameli zami.
Faka izithombe noma amavidiyo angahle asebenze kule ndaba engingabelana ngayo.
Nikeza izixhumanisi ongathanda ukuthi ngizihlanganyele nabafundi bami ezizobanikeza imininingwane eyengeziwe.
Yeka ukuvilapha futhi ungathola imiphumela engcono. Kusobala ukuthi i-imeyili yakho imane nje ingukusika nokunamathisela okuthumela ngokuzenzakalela kuma-blogger amaningi. Iyeke. Funda iposi lami ku Ungayifaka kanjani i-Pitch ne-Influencer, i-Blogger noma i-Journalist ukubona ukuthi kwenziwa kanjani!
Tags: iphimbo elibiiphimbo le-bloggeri-can-spamintatheli iphimboi-pitchprezimayelana Nomphakathiizibonelo zobudlelwano bomphakathiiphimbo lobudlelwano bomphakathiubudlelwane obubi bomphakathi
Nakhu ukuthi Wabelana kanjani ngokuqukethwe kuma-Social Media
Feb 25, 2011 ngo-5: 48 AM
Kunginike ukuhleka ngoba into yokuqala eza engqondweni yi-SPAM. Ungacabanga ukuthi uma ufuna umuntu abhale ngawe noma ngenkampani yakho ungamnika lowo muntu imininingwane eminingi edingekayo ukuze abe nombono wokuthi lelo bhizinisi limayelana nani. Njengoba lokhu kubukeka njengomyalezo wefomu kungenzeka ukuthi uthunyelwe kwabanye abantu abaningi bebuzwa into efanayo. Njengoba ngishilo kungenze ngahleka insini. Ngiyabonga ngalokho.
Aug 25, 2014 ngo-5: 30 PM
Hahaha! Kuhle! Siyabonga ngesikhumbuzi b / c Ngingumsunguli hhayi umthengisi oyisazi expert